အသစ်ဖန်ဆင်းရန် ချိုးဖဲ့ခံရခြင်း Our Daily Bread
06.06.2016 Our Daily Bread
ဖတ်ရန်: ဆာ ၁၁၉း၇၁-၇၅ | သမ္မာကျမ်းစာတစ်နှစ်စာ: □ ၆ ရာ ၂၅-၂၇ □ ယော ၁၆
အိုထာဝရဘုရား၊ စီရင်တော်မူချက်တို့သည် ဟုတ်မှန်ကြောင်းကို လည်းကောင်း၊ သစ္စာတော်နှင့်အညီ အကျွန်ုပ်ကို ဆင်းရဲစေ တော်မူကြောင်းကို လည်းကောင်း အကျွန်ုပ်သိပါ၏။ (း၇၅)
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကကျွန်တော့်အဖေသည် တောင်ပစိဖိတ်ရှိ အမေရိကန်တပ်တွင် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က အဖေသည် မည်သည့် ဘာသာရေးအတွေးအခေါ်ကိုမဆို ငြင်းပယ်ပြီး ‘‘ငါဘာအကူအညီမှ မလိုဘူး’’ ဟုပြောခဲ့သည်။
လုံးဝပြောင်းလဲသွားမည့် နေ့တစ်နေ့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
တတိယမြောက် ရင်သွေးကို မွေးဖွားရန် အမေမွေးခန်းထဲ ရောက်နေချိန်တွင် အစ်ကိုနှင့် ကျွန်တော်က ညီလေး (သို့) ညီမလေးအသစ်ကို မြင်ရ တော့မည်ဟု စိတ်လှုပ်ရှားမှုများဖြင့် အိပ်ရာဝင်ခဲ့သည်။ နောက်နေ့မနက် အိပ်ရာမှနိုးလာချိန်တွင် စိတ်လှုပ်ရှားလျက် ‘‘မိန်းကလေးလား၊ ယောက်ျားလေးလား’’ ဟု အဖေ့ကို မေးရာ၊ အဖေက ‘‘မိန်းကလေးပါ။ ဒါပေမဲ့ သူကို အသေ မွေးခဲ့တယ်’’ ဟု ပြန်ဖြေသည်။ ထိုဆုံးရှုံးမှုအတွက် ကျွန်တော်တို့ အတူတကွ ငိုကြွေးခဲ့ကြသည်။
အဖေသည် ကျိုးပဲ့ကြေမွသော သူ့နှလုံးသားကို ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် သခင်ယေရှုထံ ပထမဆုံးအကြိမ် ဆောင်ယူခဲ့သည်။ သမီးလေးကို အစားထိုး ပြန်မရနိုင်လည်း ထိုအခိုက်အတန့်တွင် ဘုရားရှင်ထံမှ ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့် နှစ်သိမ့်သက်သာခြင်းကို အဖေရရှိခံစားခဲ့ရသည်။
မကြာမီ သမ္မာကျမ်းစာကို စိတ်ဝင်စားလာပြီး သူ့နှလုံးသားကို သက်သာစေခဲ့သူထံ ဆက်လက် ဆုတောင်းခဲ့သည်။
အဖေ၏ယုံကြည်ခြင်းက တစ်နေ့တစ်ခြား ကြီးထွားလျက်၊ သခင်ယေရှု နောက်တော်လိုက် အမာခံခရစ်ယာန် ဖြစ်လာပြီး အသင်းတော်တွင် သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်းကို ဦးဆောင် သွန်သင်သူ ဆရာနှင့် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ် ဘုရားသခင်ကို ဆက်ကပ်ခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်သည် အားနည်းသူတို့အတွက် အထောက်အကူပြု တုတ်ကောက်၊ ချိုင်းထောက်တစ်ခု မဟုတ်ပါ။ ၀ိညာဉ်ရေးရာအသက်တာသစ်အတွက် အရင်းအမြစ် ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ ကြေကွဲနေချိန်တွင် သူသည် ကျွန်တော်တို့ကို အသစ်ဖြစ်စေ နိုင်သူ၊ စုံလင်ပြည့်ဝစေသူ ဖြစ်သည် (ဆာ ၁၉၉း၇၅)။ DENNIS FISHER
သင့်နှလုံးသား၌ ဘုရားသခင်ကို ပြောပြစရာ ဘာရှိသနည်း။ သင်၏ကျိုးပဲ့ကြေကွဲမှုများကို သခင့်ထံယူဆောင်လာပြီး၊ သင့်ကို စုံလင်အောင်ပြုပြင်ပေးရန် တောင်းခံပါ။
ကြေကွဲပျက်စီးမှုက ပြည့်ဝစုံလင်ခြင်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။
English Audio and Text
When I was young. I was free thinker and like the Buddha teaching. Bhen i was lying and waiting on hospital bed at age of 42, I accept God as ''conforter'.
Young time ''accept Jesus as Savior'' is very difficult as Mr.Judson. He accepted Jesus at age of 22 and Glorify God. He translated Bible in Burmese language.
When you have difficulty, unable to solve by you, please shout to Jesus, with broken heart.